MarketingSherpa, tinyere PịaMail Ahịa, etinyela otu uzo nke akwukwo aka na Email Marketing Advanced Practices!
Ndị ahịa ahịa email taa na-eche nnukwu nsogbu ihu na ịgwa ndị na-ege ha ntị okwu. N'etiti ịmata ọdịiche dị n'etiti akara gị site na asọmpi ahụ, ịnyefe ndị ruru eru na ịba ụba na ntanetị, ọ nwere ike isiri ike ịchọpụta ebe oge gị na ihe onwunwe gị bara uru, hapụ naanị ịzụlite usoro ịre ahịa email dị irè nke ga-enyere aka na mmeri zuru oke nke nzukọ gị.
dị ka a Martech Zone debanyere aha, ịtụ site March 25th na ị na-a $ 100 ego na a tupu igba egbe pụrụ iche! Gụkwuo banyere akwụkwọ ntuziaka na-enye afọ 7 nke usoro egosipụtara maka arụmọrụ azụmaahịa email!
Ọ bụrụ na ị na-eso blog m oge ụfọdụ, ị maara nke ahụ Semrush bụ ọkacha mmasị m isiokwu ngwá ọrụ - ọ bụ incredibly ike maka ịmata Keywords, na-eme asọmpi nnyocha na-amata peeji nke ị na-ogo na na-adịghị aghọta. Lelee a akụkọ nlele - nnukwu ihe! Ndị 5 mbụ na-aza ozi email a ga-enweta akaụntụ n'efu!